अबू धाबी दुबईलाई कसरी लक्जरीमा काम गर्ने यात्रा
अबू धाबी दुबई को
शारजाह मा नौकरी
रडस्टेड कम्पनीलाई पनि सिकाउनुहोस्
धेरै व्यक्ति जो संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात मा रह रहे हो। अबू धाबी देखि दुबई सम्म यात्रा गर्ने को बारे मा जानने को कोशिश। सकारात्मक पक्षमा, अबू धाबी र दुबई बीच यात्रा अत्यन्तै सजिलो र धेरै किफायती छ। विशेष गरी नयाँ विदेशियहरुको लागि वर्तमानमा कामका लागि खोज्दै। किनकि केही अवस्थामा, तपाईलाई आवश्यक पर्दछ साक्षात्कारको लागि यात्रा। उदाहरणका लागि, तपाइँ भर्ती एजेन्टबाट कल प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाई अबू धाबी देखि दुबई सम्म यात्रा गर्न आवश्यक छ।
त्यहाँ धेरै छन् नयाँ कर्मचारीहरु र संयुक्त अरब अमीरात को आगंतुकहरु को संभावनाहरु। तपाईं यातायात को लागी धेरै तरीका बाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। तथ्यको कुराको रूपमा, जुन पनि यातायात मोड तपाईं छनौट गर्नुहुन्छ। तपाईंको यात्रा योजनाहरूको लागि अधिक सुविधाजनक हुनुपर्दछ। सबै एक प्रेम युएईलाई अबु धाबीबाट दुबई। त्यो तथ्य हो, तर हाम्रो कम्पनीले यस विषयमा केही थोरै विस्तार गर्न चाहन्छ।
तपाईं बाट यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ अबू धाबी दुबई को धेरै तरिकाहरू छन्। आधारभूत सस्तो बसबाट, ट्याक्सी र लक्जरी यात्रा जस्तै हेलिकप्टर वा याटबाट। को रूपमा एक प्रवासी वा स्थानीय प्रयोगकर्ता। दुबई अबु धाबी संग यात्रा को रूप मा सबै आउँछ। दुबई शहर कम्पनीले आशा राख्दछ कि तपाईंले हाम्रो लेखको आनन्द लिनुहुनेछ। र तपाइँ को बारे मा थाहा छ यात्रा र अमीरातमा काम गर्दै.
तपाईं अबू धाबी देखि दुबई सम्म कसरि यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ?
बसमा काम गर्न यात्रा
मुख्य परिवहन तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अबु धाबी बाट दुबई सम्म यात्रा गर्न बस छ। दुबईको अल घुबाइबा बस स्टेशनबाट प्राय: प्रत्येक 20 मिनेटमा छुट्ने बसहरू।
बस समात्नको लागि उत्तम स्थान अल घुबाइबा मेट्रो स्टेशन हो। वास्तविकतामा, यो स्थान केवल केही ब्लक हो टाढा सामान्य सार्वजनिक स्थानहरु बाट। अर्कोतर्फ, यो त्यहाँबाट आउन सम्भव छ अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेट्रो प्रयोग गर्दै। संयुक्त अरब इमिरेट्समा, बसहरू अति विलासी छन्। उदाहरण को लागी, धेरै जसो बसहरु वातानुकूलित र निकट प्रकाश मोडको साथ आउँदछन्। सकारात्मक पक्षमा, मूल्य 25 डीएचएस हो र दुबई 15 ध्सबाट फिर्ता। त्यसैले यो निष्पक्ष छ यात्रुहरूको लागि पर्याप्त.
बस स्टेशन र बसहरू। सँगसँगै सञ्चालित छन् दुबई र अबु धाबी यातायात प्राधिकरण.
बसहरू दुबई र अबू धाबीमा
सम्पूर्ण यात्रु व्यवसाय जस्तै बसहरू। छन् अबु धाबी कम्पनीको हो। र तिनीहरू 15 डीएचएस प्रत्येक तरीकाबाट चार्ज गर्दैछन्। सम्झनु पर्छ, पहिलो बस6मा र 11 मा अन्तिम एक मा प्रस्थान गर्दछ। यो मनमा, तपाईंले आफ्नो दिनको योजना बुद्धिमानीपूर्वक गर्नु पर्छ। यदि हामी अबु धाबी बाट दुबई यात्रा गर्छौं भने। बसहरू टर्मिनलबाट हज्जा बिन जायद पहिलो (11th) सेन्ट र पूर्व (4) को कुनामा अवस्थित छन्।th)। र यो स्थान यो सबै प्रकारको बाट सुलभ छ। तपाईं केहि स्न्याक्स वा स्यान्डविच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वा केहि पुस्तकहरू पढ्नुहोस् संयुक्त अरब अमीरात मा एमबीए रोजगार प्राप्त.
बसले सामान्यतया रोक्दछ तपाईंलाई ड्राइभरलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईं दुबई बाट जाँदै हुनुहुन्छ। बस नजिकै रोकिन्छ यास टापु दुबईबाट अबु धाबीको लागि यात्रा गर्दै। यो तपाईलाई धेरै महत्त्वपूर्ण छ मनमा राख्न आवश्यक छ। त्यो अगाडि सिटहरू सधैं महिला र परिवारका लागि आरक्षित छन्, र बास को पछाडि पनि सीटहरू पुरुषहरूको लागि हुन्। त्यो संयुक्त अरब अमीरात मा एक नियम हो।
अबू धाबी दुबई संग टैक्सी
चलो भन्नुहोस् कि तपाईं बस हुनुहुन्छ दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बस पुग्नु भएको छ। र समय 11 र6बीचको छ। जस्तै हामी तपाईंलाई राज्यले बस वा कुनै मेट्रो स्टेशन फेला पार्न सकेनौं। तपाईंको लागि मात्र उपलब्ध विकल्प ट्याक्सी हुनेछ। तपाई सँधै प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ कार किराए मा लें वा उबर चालक बनें.
एक ट्याक्सी त्यस समयमा सब भन्दा राम्रो वाहन हो। तपाईं चाँडै एयरपोर्टबाट अबु धाबीमा जान सक्नुहुन्छ। र लागतहरू यो 300 ध्सको वरिपरि छ। यो एक उत्तम हो र एक परिवार को लागी यात्रा गर्न धेरै सुरक्षित तरीका। विशेष गरी यदि तपाईंसँग बच्चाहरू छन् भने। तिनीहरूले एक्स्टेन्सन सुरु गर्न बसको लागि प्रतीक्षा गर्दै6घण्टा वरिपरि खर्च गर्दैनन्। यसैले अबू धाबी देखि दुबई सम्म यो एक टैक्सी लेने को एक राम्रो तरीका हो।
एटिहाद कोचमा कामको लागि यात्रा
दुबईमा नयाँ कामदार एतिहाद मा अबू धाबी र दुबई को यात्रा। र यो एयरलाईनको फाइदा यो छ कि इतिहादसँग यात्रुहरू उडान गर्दै छन् इकोनॉमी क्लासमा। किनभने तिनीहरू निःशुल्क कोचको फाइदा लिन सक्छन् अबु धाबी एयरपोर्टमा सेवा। यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि यस कम्पनीले अबु धाबीको लागि र बस यात्रा निःशुल्क प्रस्ताव गर्दछ। मात्र यदि तपाईं तिनीहरूको कम्पनी प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईंसँग मान्य टिकट छ।
केवल यस कम्पनीको साथ नकारात्मक यो कि आरक्षण 24 घण्टा अघि गर्नु पर्‍यो। र यात्रा याद गर्नुपर्दछ र इतिहाद वेबसाइट भित्र पुष्टिकरण हुनुपर्नेछ वा तपाईं तिनीहरूको कार्यालयहरू कल गर्न सक्नुहुनेछ। सँधै निश्चित गर्नुहोस् तपाईं सहि बाटोमा जानुहुनेछ। किनकि तपाई घण्टा सम्म घरबारविहीन हुन चाहनुहुन्न। वा पछाडि उडान पनि र मुम्बई मा नौकरिहरु खोज्नुहोस.
अबू धाबी देखि दुबई को कार यात्रा
यी प्रकारका ट्राफिक सामान्यतया सामान्य जनताको लागि किफायती हुन्छ। त्यो सम्झनुहोस् संयुक्त अरब अमीरातमा ग्यास धेरै सस्तो छ। यसकारण अरबहरूले राम्रो टर्बो खेलकुदहरू HMV प्रयोग गर्दछन्। तपाईं देखि नै संयुक्त अरब अमीरात मा कार द्वारा यात्रा। तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ कि त्यहाँ नि: शुल्क पार्किंग छ अमीरातमा कहीँ पनि। अबु धाबी र दुबई पूरै ठूलो ठाउँ हो।
नि: शुल्क पार्किंग मा अधिकतर मा शामिल छ होटल र किनमेल केन्द्रहरु। विशेष गरी शारजाह, दुबई र अबु धाबीमा। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ त्यहाँ धेरै थप शुल्कहरू छन् जब तपाई दुबईमा एक क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईं पेट्रोल स्टेशनमा जान अघि यसको बारेमा सोध्नुहोस्। अन्यथा, तपाईंको बैंक कार्ड स्वचालित रूपमा शुल्क लगाइनेछ.
दुबईलाई दुबईमा ड्राइभ गर्दा
सधैं हुन्छन् दुबई दुबई अबु धाबी मा राम्रो राजमार्गहरु। र ती मध्ये धेरै प्रहरी मुक्त छन् संयुक्त अरब अमीरातमा। र यो ध्यानमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस् कि यो आवश्यक छ जब तपाईं युएइमा कार लिनुहुन्छ। वा तपाइँ पर्यटकको रूपमा ड्राइभ गर्न केवल एउटा कार भाँडामा लिनुहुन्छ। तपाईंसँग तपाईंसँग एक अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्र हुनु आवश्यक छ। यसका अतिरिक्त तपाईसँग नियमित ड्राइभर इजाजतपत्र तपाईको आफ्नै देशले जारी गर्नु पर्छ। तपाईंको हातमा पनि तपाईं केहि cryptocurrency व्यापार वा त्यहाँ काम फेला पार्न सक्नुहुन्छ.
यो नियम हाम्रो द्वारा लागू गरिएको छ दुबईमा अनुभव र नयाँ प्रवासीहरू। अबुधाबी भन्दा दुबईमा कार भाडामा लिन सजिलो छ। सायद किनभने यो धेरै ठूलो क्षेत्र हो। तर ती दुवैको कार लिन कुनै पनि हिसाबले यो धेरै गाह्रो छैन संयुक्त अरब एमिरेट्स को एयरपोर्टहरू।
दुबई देखि अबू धाबी को बिना कार को?
यदि तपाईं ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन भने यो कुनै समस्या छैन। तेसका लागि एक विश्व-स्तरीय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दछ ठाउँमा यातायात प्रणाली। धेरै जसो मानिसहरु अबु धाबी बाट दुबई को यात्रा को बारे मा एक गलत धारणा मा बस्ने। यदि तपाईं रातको समयमा दुबई र अबु धाबी बीच यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने। यो असम्भव छ यदि तपाईं कारमा चढ्नुहुन्न र आफैँ त्यहाँ ड्राइभ गर्नुहोस्।
अर्कोतर्फ, यो 2018 र 21ts शताब्दी हो। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यातायातको साथ गत बर्षको समस्या सही हुन सक्छ। तर पछि सरकारले यस केसलाई छुन खोज्छ। दुबईको सडक र यातायात प्राधिकरण र अबू धाबीमा यातायात विभाग। यो समस्या समाधान गर्न असाधारण कडा परिश्रम गर्न सुरू गर्नुहोस्। साथै धेरै निजी कम्पनीहरू यसको साथ व्यवहार शुरू गर्नुहोस्। तीमध्ये धेरै छन् हालैका वर्षहरूमा यो समस्या समाधान गर्न मेहनत गरे। हेर्नुस् संयुक्त अरब अमीरात मार्गहरूमा यात्रा। त्यहाँ एक नयाँ अद्यावधिक आउँछ।
अबु धाबी दुबई को काम को लागि एक नयाँ एक्सप्रेस को रूप मा
त्यहाँ छ नयाँ एक्सटेट्स को एक धेरै काम को लागि यात्रा गर्दै छन्। विशेष गरी अबु धाबीबाट दुबई। अवश्य पनि, तिनीहरूमध्ये केहीले केही पैसा बचत गरिरहेका छन्। र तिनीहरू भाग जाँदैछन् र प्रत्येक मार्गमा Ds200 को माथिल्लो ट्याक्सी भाडा तिर्न सक्छन्! तर सामान्य तरिका तिनीहरू यात्रा गर्न धेरै खुसी छन् मानक तरिकामा काम गर्न। यात्राको सब भन्दा समझदार तरीका दुबईमा कामको लागि एक्सटेटको रूपमा एक सार्वजनिक बस छ।
यात्रा समय सीमा अबू धाबी दुबई सम्म? एक र आधा दुई घण्टा। सबै समय र यातायात मा निर्भर गर्दछ संयुक्त अरब अमीरातमा.
कति गर्छ युएई यात्रा गर्न लागत?. टिकट Dhs25 एकै तरिकामा हो। र त्यो रकम एक मानक आरटीए नोएल कार्ड प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
कति Expats खर्च गर्न आवश्यक छ?. बस द्वारा यात्रा गर्नु सबै भन्दा उचित परिवहन हो। र अहिले सम्म सस्तो मार्ग काम गर्न को लागी दुबई देखि अबु धाबी। निस्सन्देह, यदि तपाइँ पूर्णतया नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईंको आफ्नै कार ड्राइभ छैन। र यसको आधारमा दुई विकल्पहरू छन् दुबईको क्षेत्र तपाई हाल लाइभ र काम गर्दै हुनुहुन्छ.
हेलिकप्टर उडानहरू लक्जरी मार्ग
ठीक छ, तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुने अन्तिम यात्रा अबु धाबीबाट दुबईको लागि हेलिकप्टर उडान गर्दैछ। यो एक हो युएईमा सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा विलासी तरिकाहरू। र हामी सबै दुबई र अबु धाबीलाई चिन्छौं। सामान्यतया, धनी मानिस द्वारा राम्रोसँग चिनिन्छ र महँगो ठाउँहरू जस्तै 7- तारे होटलहरू र स्पोर्ट्स कार र विलासी भिला को भारी मात्रा।
यो यात्रा ज्यादातर संयुक्त अरब अमीरात मा स्थानीय व्यवसायी मान्छे को लागि छ। केहि भारतीय निर्वासित यात्रा गर्न हेलिकप्टरहरू प्रयोग गर्दैछन्। तर तिनीहरू हुन् वास्तव मा राम्रो काम छ, उदाहरण को लागि, एक सीईओ वा दुबई मा CFO स्थिति.
घुम्ने समय? 35-55 मिनेट मौसम परिस्थितिमा आधारित।
यसको कति खर्च हुन्छ? विलासी हुन? निजी हेलीकाप्टर भाडामा सबैको लागि धेरै छ। सामान्यतया, 14,900 -2 मान्छे को लागि Dhs5 को आसपास एक चार्टर शुरू हुन्छ
कसैले किन यसको आवश्यकता छ? केहि मानिसहरू पैसा मात्र एउटा कागज हो। त्यसैले उनीहरूसँग हेलिकप्टर भाँडामा राख्न कुनै आपत्ति छैन। उदाहरण को लागी, एक राजनीतिज्ञ राजधानी मा आउन चाहान्छन्। विशेष गरी यदि उनीहरू भ्रमण गर्दैछन् दुबईका एक राजा। तिनीहरूसँग कक्षाको उचित स्तर हुनुपर्छ। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, उत्तर हेलिकप्टर लिनु हो। तिनीहरू सम्भवतः एक सम्झौता र सम्पर्क बनाउन।
दुबई र अबू धाबी मा लक्जरी यात्रा
त्यहाँ धेरै निजी चार्टर छन् युएइमा कम्पनीहरू र खेल कारहरू। उदाहरण को लागी, फ्लाई दुबई वा दुबई होटेलहरूले टेलरले निर्मित ग्राहक सेवा समाधानहरूको दायरा प्रस्ताव गर्छन्। र ती सबै ग्राहकहरूको विशिष्ट आवश्यकताहरूमा आधारित छ।
केहि व्यापारिक अधिकारीहरु अबू धाबी दुबई सम्म यात्रा गर्छन्। र तिनीहरूमध्ये अधिकांश दुबई वा अब्बाबु नजिकैको हेलिपेडबाट उठ्न सकिन्छ। जब तपाईं कामको लागि अबू धाबी पुग्नुहुन्छ। तपाईं निश्चित रूपमा यी मध्ये एक हुनुहुनेछ। ए वरिष्ठ प्रबंधन पदहरूमा कार्यकारी कार्यकारी, तपाई लक्जरी शैलीमा यात्रा गर्नुहुनेछ।
तपाईं पक्कै हुनेछ एउटा चाडपर्व शहर र शहर केन्द्र एक लो भ्रमण गर्नुहोस्t यसबाहेक, तपाईंको ड्राइभर अबु धाबीको एमिरेट्स प्यालेसमा तपाईं वा तपाईंको परिवारलाई ड्रप-अफ गर्दछ। त्यसो भए ती सबै अबु धाबी बाट दुबई लक्जरी यात्रा को रूप मा आउँछ। लक्जरी यात्रा पनि धेरै अन्य विकल्पहरू समावेश गर्दछ जस्तै हेलिकप्टर आश्चर्यजनक संग चित्रित कर्मचारी। शान्त, वातानुकूलित केबिनहरू VIP कार्यकारीहरूका लागि। र ती मध्ये धेरै हातले सिलाइएको लेदर इन्टीररहरूसँग आउँदछ जुन तपाईंलाई पाउनेछ व्यापार वर्ग मा तपाईंको गन्तव्य.
दुबई UberCHOPPER यात्रा
तपाईंलाई थाहा छ दुबई बढ्दै गइरहेको व्यापार र आर्थिक हो उच्च स्तरमा पुग्न। एक उदाहरण अबु धाबी यात्रा गर्न। के तपाईंले आफैलाई हेलिकप्टर लिन सक्नुहुन्छ? उबरबाट। सम्भावित कम मूल्यको लागि प्रति व्यक्ति डीएचएसएक्सएनएमएक्समा एक नजर राख्नुहोस् UberChopper वेबसाइट।
विशेष गरी नयाँ अबुधाबी प्रयोगकर्ताहरूको लागि सेवा राखियो। यो एक तरिका हो अबु धाबी बाट दुबई सम्म यात्रा गर्न। तपाई, उदाहरण को लागी, एटलान्टिस बाट पाम हेलिप्याड बाट प्रस्थान गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ मार्केटिंग कार्यहरू व्यवस्थापन को एक मजबूत पक्ष हो। र एउटा शहरको अन्तमा दुबई शहरको होटल केन्द्रहरू। यो यो वास्तवमै अवस्थित छ नक्कली विवरण होईन। तपाईं उबर वेबसाइटको भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूसँग यकिन गर्नुहोस्। तपाईं एक हेलिकप्टर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र संयुक्त अरब एमिरेट्स मा उडान.
दुबईमा अबू धाबी मा यात्रा गर्ने नौका
संयुक्त अरब अमीरात मा सबैभन्दा प्रसिद्ध यात्रा याचिंग हो। तर यो संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात मा केवल एक धेरै सानो प्रतिशत को लागि हो। उदाहरणका लागि कुवैतमा रहेका भारतीयहरू। समय समयमा यो चीज गर्न पर्याप्त पैसा बनाउन।
नौकामा यात्रा समय? केवल आधा घण्टा, वा अधिकतम पैंतालीस मिनेट। एमिरेट्स एक हो केवल आश्चर्यजनक ठाउँ यदि तपाईंसँग पैसा छ भने। अर्कोतर्फ, तपाईं युएईमा धनी हुन सक्नुहुन्छ.
यो कति खर्च गर्छ? यो सबै याटको आकारमा निर्भर गर्दछ। त्यहाँ कुनै तरिका छैन एक अर्थव्यवस्था वर्ग टिकट याट चार्टर्ड कम्पनीहरूको साथ। मूल्यहरु वास्तव मा याट को आकार मा निर्भर गर्दछ कति मानिस तिमी संग हुनेछ। यदि तपाईंलाई बजार थाहा छ भने यो यति महँगो छैन।
यो कसरी नौकरी संग काम गर्दछ? यदि तपाईंसँग छ भने यातायात कि त यूरोपमा बुक गरियो वा एशिया उदाहरणका लागि अमीरात वा इतिहाद। त्यसोभए स्मार्ट तरीकाले तपाईं निजी विमानस्थलमा अवतरण गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसोभए तपाईं ड्राइभर लिन सक्नुहुन्छ, उसले तपाईंलाई पोर्टमा लैजान्छ। र त्यहाँबाट तपाईं याट प्रयोग गर्नुहुनेछ।
यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईले याटहरू अग्रिम बुक गर्नुहोस्। तपाईं अचम्मित हुन सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ छन् युएईमा लाममा थुप्रै व्यवसायिक व्यक्तिहरू। र ती व्यक्तिहरू र तिनीहरू पनि तपाईंसँग एयरपोर्टमा छन्। र तिनीहरू पहिले नै यो बुक हुन सक्छ। त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई यसलाई पर्याप्त छिटो बुक गर्नुहुन्छ। दुबई वा अबु धाबीमा समेत विशेष बुकिंग नौका व्यस्त बजार हुन सक्छ।
अबू धाबी को दुबई को लागि भविष्य को रास्ता
यो दुबई सरकार भविष्यमा दुबई स्वायत्त परिवहन रणनीति लागू गरिनेछ भनेर घोषणा गर्दछ। तिनीहरू दुबई र अबू धाबी अन्तर्गत हाइपरलिप र पार्किङ निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। र धेरै अन्य परियोजनाहरु किनभने यदि तिनीहरूले पछ्याउनेछन् रणनीति। दुबई र अबु धाबी को भविष्य परियोजना 44 प्रतिशतले यातायात लागत कटौती गर्न मद्दत गर्दछ। र किनकि उनीहरूले यसलाई ब्यवस्थापन गर्छन् जसले एक वर्षमा AED 900 मिलियन सम्मको बचतको परिणाम दिन्छ। र यस प्रकारको पैसाको साथ, तिनीहरूले काम गर्न नयाँ स्थानहरू निर्माण गर्नेछन्.
अबू धाबी देखि दुबई सम्म काम गर्ने यात्रा समय ?. सरकार सम्बन्धित स्रोत भन्दै यो 15 मिनेट अन्तर्गत भविष्यवाणी हुनेछ!। त्यसोभए तिनीहरू अब भन्दा छोटो मार्गको प्रबन्ध गर्न खोजिरहेका छन्। अवश्य पनि, यो हुनेछ राम्रो अवस्थित आगन्तुकहरु र नयाँ एक्सटेट्स को लागि राम्रो। विशेष गरी यदि संयुक्त अरब अमीरात को2घंटहरुमा 15 मिनेट देखि समय सीमा को कटौती गर्दछ। अबू धाबी देखि दुबई सम्म यात्रा को लागि।
यो कति खर्च हुनेछ? हाइपरलुप जुन सरकारले भन्छन। आश्चर्यजनक रूपमा यो हालको उच्च गति रेलको लागत भन्दा सस्ता हुनुपर्दछ। त्यसैले हामी सक्दैनौं कहिले हुन्छ प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यदि तपाइँ एक नजर हेर्न उत्साहित हुनुहुन्छ भविष्य परियोजनाहरू तपाईले निश्चित रूपमा अरब व्यापार वेबसाइट तल जानुपर्छ। अर्कोतर्फ, यात्रा उद्योग सहित पनि, संयुक्त अरब अमीरातमा नयाँ सुरक्षा स्थानहरू खोलिएको छ.
यात्रा अबू धाबी वा दुबईको लागि निष्कर्ष?
त्यसैले के के उत्तम छ बाँच्नु र कामबाट यात्रा गर्ने ठाउँ हो?। त्यहाँ कुनै उत्तर छैन, यो सबै तपाइँ के गर्नुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ। र हाल तपाई कति पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ। दुबई शहर कम्पनी समीक्षा हो सबै कसले तपाईंलाई जोड्ने। हामीले केहि मानक तरिकाहरू र केही काल्पनिक तरिकाहरू ढाक्न प्रयास गरेका छौं। विशेष गरी यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ यात्रा र विदेशमा काम गर्नुहोस् या अबू धाबी देखि दुबई सम्म।
युएईमा त्यहाँ केहि सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षहरू छन्। तर यात्रा अबु धाबी दुबई बीच ठीक हुनुपर्छ। आशा छ कि तपाईले हाम्रो लेख पढ्नु भएको छ। सकारात्मक रहनुहोस् र दुबई शहर कम्पनीलाई प्रेम गर्नुहोस्। किनभने हाम्रो टोली जहिले पनि हुन्छ बिस्तारै सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्दै.
दुबई सिटी कम्पनी अब दुबईमा जागिरको लागि राम्रो गाइड प्रदान गर्दछ। हाम्रो टोलीले हाम्रो लागि प्रत्येक भाषाको जानकारी थप्न निर्णय गर्यो Dubai दुबई। त्यसो भए यस कुरालाई ध्यानमा राखेर, अब तपाईं संयुक्त अरब एमिरेट्समा गाईडहरू, सुझावहरू र रोजगारी पाउन सक्नुहुन्छ तपाईंको आफ्नै भाषाको साथ.